Harriet Beecher Stowe, ဦးလေးတွမ်ရဲ့ Cabin နှင့်အခြားဝတ္ထုစာအုပ်ရေးသားသူကနေကိုးကား။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူ: Harriet Beecher Stowe အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Selected Harriet Beecher Stowe ကိုးကားချက်များ
•ယင်းအတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်ကယ့်ကိုတဝတည်းဖြစ်ကြ၏: သူတို့ကယနေ့ဖြစ်ကြ၏။
•အမြိုးသမီးမြားမဆိုအခွင့်အရေးများချင်လျှင်သူတို့ပိုကောင်းတဲ့သူတို့ကို ယူ. , ကအကြောင်းဘာမျှမပြောပါဖူး
•ဒါကြောင့်ရှည်လျားပညတ္တိကျမ်းနှလုံးသားများရိုက်နှက်နှင့်ချစ်ခင်နေထိုင်နေနှင့်အတူ, ဤအရာအလုံးစုံလူသားတွေစဉ်းစားသကဲ့သို့, မာစတာပိုင်သာအဖြစ်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာ - ထိုပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဥပဒ်, ဒါမှမဟုတ် imprudence ဒါမှမဟုတ် kindest ပိုင်ရှင်၏သေခြင်းနှင့်အမျှဤမျှကာလပတ်လုံး, စခွေငျးငှါ ဤမျှကာလပတ်လုံးကကျွန်စနစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လှပသောသို့မဟုတ်နှစ်လိုဖွယ်ဘာမှလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး - ကူကယ်ရာမဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုများနှင့်ပင်ပန်းတဦးအဘို့အမျိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အလိုလိုကျလှနျးခွငျး၏အသက်တာကိုဖလှယ်ဖို့သူတို့ကိုအကြောင်းမရှိကိုမဆိုနေ့ဖြစ်၏။
•ငါမပိုလမ်းသို့စီးကျလာတယ်နှင့်တစ်ဦးကိုမီးရှို့အိမျမှသူမ၏ကလေးများကယ်ဖို့အကူအညီအော်ဟစ်အဆိုပါ rhetorician ဒါမှမဟုတ် elocutionist ၏သွန်သင်ချက်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်သူမိခင်ထက်စတိုင်လ်ဒါမှမဟုတ်စာပေထူးချွန်၏ထင်
•ကိုယ်ကမရေးခဲ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင်ကရေးသားခဲ့သည်။ ငါမျှသာကသူ့သတ်ပုံကိုပြု၏။
•သင်တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာရာအရပျသို့အရငျကသငျသညျပိုရှည်တဲ့မိနစ်အပေါ်ကိုင်နိုင်ဘူးပုံရသည်မရောက်မှီတိုင်အောင်, အရာအားလုံးသည်သင်တို့တဘက်၌ဝင်သောအခါအသောဒီရေကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ့်ထိုအရပ်ကိုနှင့်အချိန်ဖြစ်၏, ထို့နောက်အရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။
•အမှန်တရားကျနော်တို့အဆုံး၌ရှေးရှေးပေးနိုငျ kindest အရာဖြစ်၏။
ပျင်းရိ - •လူ့သဘောသဘာဝခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအထက်ဖြစ်ပါတယ်။
•ယင်း bitterest မျက်ရည် unsaid left စကားလုံးများနှင့်အကျင့်ကိုအဘို့အပြန်ဖျက်ပြီးကျန်ရစ်နေကြပါတယ်သင်္ချိုင်းကျော်သွန်းလောင်း။
•နှင်တံနှင့်အလွဲသုံးစားမှု laudanum ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏: သင်ပညာရှိကျဆင်းအဖြစ်ဆေးထိုးနှစ်ဆရန်ရှိသည်။
•နေ့စဉ်အသက်တာ၏အရသာကအသေးစိတ်အတွက်အမှန်တကယ်မွန်မြတ်ခြင်းနှင့်သူရဲကောင်းဖြစ်, နည်းနည်းအမှုအရာအတွက်တကယ်ကြီးအဖြစ်စေရန်, Canon ထိုက်ဖြစ်သကဲ့သို့ရှားပါးနေတဲ့သီလဖြစ်ပါတယ်။
•အဘယ်အရာကိုသာမန်ကောင်းမြတ်ခြင်းကနေခွဲခြားအဖြစ်, ငါ့မြင်ကွင်းထဲမှာ saintliness ကသူရဲကောင်းများ၏စက်ဝိုင်းအတွင်းဘဝဖြစ်စေသောအသက်ဝိညာဉ်၏သဘောထားကြီးမှုနှင့်တန်ခိုးအာနုဘော်တစ်အချို့ရဲ့အရည်အသွေးပါပဲ။
•တစ်ခုမှာတစ်ဦးတတျနိုငျသလျှင်ခမ်းနားခြင်းနှင့်သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်ပါတယ်; မဟုတ်လျှင်မူကားအဘယျကွောငျ့မှာအားလုံးကြိုးစားကြ? တဦးတည်းကအရမ်းသူရဲကောင်းအလွန်ကြီးသောအလွန်တစ်ခုခု, ဖြစ်လိုလား, သို့မဟုတ်လျှင်မ, ထို့နောက်မှာအနည်းဆုံးအလွန်စတိုင်နှင့်အလွန်ဖက်ရှင်။ ဒါဟာငါ့ကို bores သောဤသညျထာဝရသာမန်ပါပဲ။
•ငါကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများကအကြွေးအမြင့်ဆုံးတာဝန်၏ယခုစကားပြောနေအကောငျးဆုံး, အများဆုံးမြင့်မြတ်တဲ့ငါ - မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် Noble, ကောင်းမြတ်ခြင်း, စင်ကြယ်ပုပ်နိုင်သောအဖြစ်ကိုစောင့်ရှောက်၏။ ။ ။ ။ ငါတို့သည်ငါတို့၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးက remonstrance မရှိဘဲချမ်းအေးနှင့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းနှင့်အတိအကျဖြစ်လာပါစေလျှင်, ငါတို့သည်အဘယ်သူမျှမစစ်မှန်တဲ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့မရှိစစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဖြစ်ကြသည်။
•အနည်းငယ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုခညျြးနှီးဆှေးနှေးအတွက် setness Self-အလိုတော်၏ unwatch ဗီဇ၏ရလဒ်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုယ်သူကျော်တစ်ဦးမနာလိုအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တည်ထောင်ရန်သောအရာမိမိအထဲ၌ detect လုပ်ဖို့မဆိုလူတစ်ဦးကို enable ပါလိမ့်မယ်။
•လူတိုင်းခန္ဓာကိုယ်အပေါငျးတို့သအင်အားကြီးထုတ်ဆောင်တော်မူသောခေတ္တခဏနှင့်စိတ်ကိုငါတို့ရှိသမျှအဘို့ကိုအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်သောစိတ္တဇအတွက်ဝန်ခံ, ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာလူအများစုသူတို့တတ်နိုင်သမျှအားလုံးကဖယ်ရှားပစ်ရပြုပါနှင့်အထွေထွေစည်းမျဉ်းအဖြစ်ဘယ်သူမှထက်အများကြီးပိုမ အခွအေနလုပ်ဖို့နှင်ထုတ်။
•ကျေးဇူးတော်နေ့သေးကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ မြောက်နှင့်တောင်နှစ်ဦးစလုံးဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပြစ်မှားခံကြနဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဖြေဆိုရန်မိုးသည်းထန်စွာအကောင့်ရှိပါတယ်။ မဟုတ်မတရားမှုနှင့်ရက်စက်မှုဆန္ဒပြရန်အတူတကွပေါင်းစပ်ပြီးနှင့်အပြစ်တရား၏ဘုံမြို့တော်အောင်အသုံးပြုပုံကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဤပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါသည် - ပေမယ့်နောင်တတရား, တရားမျှတမှုနှင့်ကရုဏာတရားအားဖြင့်; surer မဟုတ်များအတွက်မတရားမှုကိုနှင့်ရက်စက်မှုလူအမျိုးမျိုးပေါ်သည်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပိုမိုအားကောင်းဥပဒေ, ထက်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိအရာအားဖြင့်ကြိတ်ဆုံကျောက်နစ်မြုပ်ထာဝရတရားပေတည်း။
•ဘယ်သူမှအစဉ်အဆက်တစ်ကျွန်သင်္ဘော၎င်း၏ပါတီအားအတွက်မျှော်ငါးမန်းတစ်စီတန်းအတူနီးကပ်စွာ-ထုပ်ပိုးတပါးအမြိုးသားဧဝံဂေလိတရား၏အရောင်သည်အလင်းကိုခံစားဖို့ကျော်ယူဆောင်နေကြသောသာသနာပြုအဖွဲ့အစည်း, ကြောင်း။ သူ့ကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်
•သင်တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာရာအရပျသို့အရငျသောဒီရေကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ့်ထိုအရပ်ကိုနှင့်အချိန်ဖြစ်၏, သင်သည်ပြီးတော့အရှုံးမပေးဘယ်တော့မှ, ကြာကြာတစ်မိနစ်အပေါ်ကိုင်နိုင်ဘူးသော်လည်းအဖြစ်ပုံရသည်မရောက်မှီတိုင်အောင်အရာခပ်သိမ်း, သင်တို့တဘက်၌သွားသည်အခါ။
•မဟာအရာဝတ္ထုဘာသာစကားတစ်ခုကိုဖတ်ပါနှင့်ခံစားရန်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်, နှင့်သင်ကြားရေး၏စိတ်ဖိစီးမှုသည်ဤရလဒ်မှလုံးဝမရှိမဖြစ်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုအပေါ်ထားရှိခဲ့ကြသည်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအားလုံးကိုတန်ခိုးရှိရောက်ရှိမည်နှင့်၎င်း၏ပန်းပွင့်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်မှန်လျှင်။
•မူလစာမျက်နှာခိုင်မာတဲ့ချစ်ခင်၏ပေမယ်တစ်ခုလုံးကိုကွှငျးမဲ့မသာတဲ့နေရာဖြစ်၏ ဒါကြောင့်ငါတို့နောက်ကွယ်မှသွန်း-ချွတ်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်အဝတ်အစားတာအပျက်အစီးထွက်ခွာပိုပြီးသတိထားနဲ့စောင့်လိင်ဆက်ဆံမှုမှထွက် သွား. ရာမှဘဝသုတ်သင်စမ်းလေ့ကျင့်၎င်း၏ backroom ၎င်း၏တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပါသည်။
•လူအထဲတွင်အသကျရှငျနဲ့သူ့ကလေးတွေဖို့ကထွက်ခွာ၏မြော်လင့်ခြင်းနှင့်အတူအင်္ဂလန်မှာအိမ်တအိမ်ဆောက်; ငါတို့ကဲ့သို့အလွယ်တကူခရုသည်မိမိ shell ကိုပြုသကဲ့သို့အမေရိက၌အကြှနျုပျတို့၏အိမ်များကိုသွန်း။
•ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလ၌ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြီးမြတ်ဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေတစ်ခုမှာ ... အမျိုးသမီးတွေဗိသုကာရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ငှားဖို့ built အိမ်များနှင့်အတူမကောင်းသောအကြံကိုထိုလူအပေါင်းတို့သည်အထီး contrivances ဖြစ်ပါတယ်။
•ပန်းချီအနည်းဆုံးသည်အဘယ်မှာရှိအမည်ရ, အမြင့်ဆုံးကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအတွေးအခေါ်များ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်, သူတို့ရဲ့ဂီတသူတော်ကောင်းတရားခိုင်မာတယ်။
•အရှည်ကြာဆုံးနေ့က၎င်း၏အနီးကပ်ရှိရမည် - ထို gloomiest ညဥ့်နံနက်မှပေါ်ဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။ အချိန်လေး၏ထာဝရ, inexorable ချုံးအစဉ်အဆက်ကိုထာဝရအညဥ့်ဖို့ဘေးဥပဒ်ကိုခံရသောနေ့အပွေးသှားတာနှင့်ပဲထာဝရနေ့၏ညဉ့်သည်။
ဒေါ်ရသီက Parker မှစ. •:
မိခင်, ဇနီးနှင့် Authoress အဖြစ် -
ဦးလေးတွမ်ရဲ့ Cabin ၏အဆုံးကနေ•:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ပြည်နယ်ကမ်းခြေတွင်မိသားစုများ၏ကျိုးအကြွင်းအကျန်, ဆင်းရဲသောသူကိုချိုးဖဲ့ထွန်းသစ်စကြသည် - သိကျွမ်းခြင်း၌အားနည်းသော, နှင့်များစွာသောအမှုများအတွက်အိုမင်း - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး, ကျွန်စနစ်၏အပွောငျးအလဲအနေဖြင့်, အံ့ဖွယ်ပေး, ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်စာရိတ္တအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှနိယာမ confounds နှင့် confuses ပေးသောစနစ်တစ်ခုကနေကိုယ်ကျင့်တရားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၌တည်၏။ သူတို့ကသငျတို့တှငျခိုလှုံရာရှာလာ; သူတို့ပညာရေး, အသိပညာ, ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုရှာခြင်းငှါလာကြ။
သငျသညျဤသူတို့သည်ဆင်းရဲသား, ကံမကောင်းစွာ, အိုခရစ်ယာန်တွေကိုအဘယျသို့ကြွေးသလဲ? တိုင်းအမေရိကန်ခရစ်ယာန်အာဖရိကမျိုးနွယ်မှအမေရိကန်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသူတို့အပေါ်သို့ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီသောအမှားအဘို့အလျှော်ကြေးမှာအချို့အားထုတ်မှုကြွေးမဟုတ်လော အသင်းတော်များနှင့်ကျောင်း-အိမ်၏တံခါးများသူတို့အပေါ်မှာပိတ်လိမ့်မည်နည်း ပြည်နယ်များထသူတို့ကိုထွက်လှုပ်ရကြမည်လော ခရစ်တော်၏ဘုရားကျောင်းတိတ်ဆိတ်စွာသူတို့ကိုမှာပစ်ချသောကဲ့ရဲ့စကားကိုနားထောငျ, သူတို့ကိုဆန့ ်. ကြောင်းကွာအကူအညီမဲ့လက်မှကျုံ့နှင့်ဝေးရဲစွမ်းသတ္တိအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နယ်နိမိတ်ထဲကနေသူတို့ကိုကျပ်တည်းစွာလိုက်မယ်လို့သောရက်စက်မှုကျုံ့နိုင်မည်နည်း ဒါသူဖြစ်ရမည်ဆိုပါကတစ်ဦးငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါသူဖြစ်ရမည်လျှင်လူမျိုးတို့၏ကံကြမ္မာအလွန်စိတ်ကြင်နာတတ်သော, နုသနားစုံမက်သည်သူတစ်ဦးက၏လက်၌ကြောင်းကိုအောက်မေ့သောအခါ, တိုင်းပြည်, တုန်လှုပ်ဖို့အကြောင်းပြချက်ရပါလိမ့်မယ်။
Harriet Beecher Stowe အကြောင်းကပို
Harriet Beecher Stowe ကိုယ်ရေးဖိုင်
Harriet Beecher Stowe အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Harriet Beecher Stowe Links များ
တစ်ဦးက B ကို ကို C : D , E က F , G H ကို ငါ J ကို ငွေကျပ် L ကို M က N ကို အို P ကို မေး R ကို က S T က ဦး V ကို W က X ကို Y ကို Z ကို
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အသံများ - အမျိုးသမီးများရဲ့ Quotes အကြောင်း
quote စုဆောင်းခြင်း Jones ဂျွန်ဆင် Lewis ကအားဖြင့်စုဝေးရောက်လာကြ၏။ Jones ဂျွန်ဆင် Lewis က©ဒီစုဆောင်းမှုနှင့်တစ်ခုလုံးကိုစုဆောင်းမှုထဲတွင်တစ်ခုချင်းစီကိုကိုးကားစာမျက်နှာ။ ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကျော်စုဝေးကာအလွတ်သဘောစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ငါကကိုးကားနှင့်အတူစာရင်းမပြုလုပ်လျှင်ကိုယ့်မူရင်း source ကိုပေးနိုငျဘဲဖြစ်ကြောင်းကိုနောင်တ။
Jones ဂျွန်ဆင် Lewis က။ "Harriet Beecher Stowe ကိုးကား။ " အမျိုးသမီးများသမိုင်းအကြောင်း။ နေ့စွဲဝင်ရောက်: (ယနေ့) ။ ( ဤစာမျက်နှာအပါအဝင်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုကိုးကားဖို့ဘယ်လိုပေါ်ပို )
Florence ကယ်လီ: အလုပ်သမားနှင့်စားသုံးသူတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ
ပြင်သစ်တွင်နောက်ထပ်သန်း 2500 စကားလုံးတွေအသံထွက်ဖို့ကိုဘယ်လို
Anyang: ယဉ်, တရုတ်များ၏ကြီးမားကြေးခေတ် Shang မင်းဆက်မြို့တော်
အဓိပ္ပာယ်: ဘာသာရေးအာဏာပိုင်ကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ လောကအာဏာပိုင်
တရုတျထဲတွင် "ကောငျးနံနက်ပိုင်း" နှင့် "ကောင်းမွန်သောညနေပိုင်း" ဟုပြောပါဖို့ကိုဘယ်လို
Burrow ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းဖြင့် MAC Powersphere ယာဉ်မောင်း
နာကျင်မှု့မရှိတဲ့ Multivariate စီးပွားရေးစီမံကိန်းလုပ်ပါဖို့ကိုဘယ်လို
Alkenyl Group ၏အဓိပ္ပာယ်
သင့်ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလေ့အကျင့်မှဘဝက Add လိမ့်မည်ဒါကဘတ်စကက်ဘောယှဉ်ပြိုင်ပွဲ
အတ္ထုပ္ပတ္တိ: ဂျိုး Slovo
Que debes ဖုံးကိုဓားရှည် del ထိန်းချုပ်မှု migratorio အယ်လ် llegarala aduana ရေိ
ရော်ဂျာဖက်ဒရေးရှင်းရဲ့ Backhand ဓာတ်ပုံလေ့လာ
တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်, Nixon, နှင့်ဝါးတားဂိတ်မြွေပူရာကင်း